बाँस्कोटासँग ठ्याक्कै अनुहार मिल्छ भन्दै मीना ढकालले पुर्व पति मनोजलाई मुछेपछि… – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बाँस्कोटासँग ठ्याक्कै अनुहार मिल्छ भन्दै मीना ढकालले पुर्व पति मनोजलाई मुछेपछि…
काठमाडौं। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद शिलशिलामा बिचौलियासँग ७० करोडको कमिसनका लागि मन्त्री बाँस्कोटाले मोलतोल गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले प’दबाट रा’जीनामा दिएका छन्। यो प्रकरणको ब्रे’क हाम्रा कुरा डटकमले बिहीबार करिब २ बजे वेबसाइट मार्फत गरेको थियो । मध्यारातामा प्रकाशित समाचार उज्यालो हुदा छ्या’प्छ्याप्ती भैसकेको थियो ।
झिसमिसे उज्यालो हुदा १ लाख भन्दा बढी शेयर भएको हाम्रकुरा डटकमको त्यो समाचार झन्डै १० लाखले पढी सकेका थिए। सामाजिक संजालमा भाइरल भएको उक्त समाचरले बास्कोटाको मात्र ब’दनाम गरेन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको समेत आ’लोचना भयो । अन्तत बास्कोटाले मन्त्रिबाट रा’जिनाम दिए ।बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसनको डि’ल गरेको अडियो मिडियामा ल्याएर रा’जिनामा गर्न बा’ध्य पार्ने पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीको चौ’तर्फी चर्चा भएको छ।
“#नेकपाका #लोकप्रियकलाकार #MydearEx को र ७० #करोड मन्तरीको face cut ठ्याक्कै मिल्ने भकोले #गोफ्लेको अनुहार आजसम्म #नहेरेको #हिजोरातिदेखि #फेशबूकमा #लोकप्रिय भकोले आफैले फोटो सहित पोष्ट गर्न कर लाग्यो? #फेरिDear Ex नि जैले #करोड भन्दै #चिच्याइ राको हुन्छ!? #हेप्नी हाम्लाइ?”